Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Shirkii Shalay Ka dhacay Sweden
Warbixintii Shirkii Shalay Ka dhacay Sweden
Posted by ONA Admin	/ December 3, 2012
02/12/2012 Xarunta jaaliyada Stockholm ee dalka Sweden waxaa kulan isugu yimid jaaliyada Sweden dhamaan laamaheeda kala duwan
Kulanka oo ahaa kulan aad muhiim u ahaa lana xiisaynayay ayaa waxaa si farxadi ay ku dheehantahay loogu soo dhaweeynayay halgame Abdulaahi Husein oo ah halyay reer ogadenia ah isaga oo gacan weeyn ka gaystay baahinti filimaanti laga soo daayay TV-yada caalamiga ah midaas oo halganka xaqa ah ee shacbiga Ogadniya sare usii qaaday.
Sidoo kale waxaa marti sharaf ku ahaa shirka madax sarsare oo katirsan Golaha dhexe ONLF sida halgame Riyaala Xaamud, halgame Gama’diid & isku duwaha jaaliyadaha yurub halgame Bashiir Yuusuf.
Kulanka maanta oo dhawr waji lahaa ayeey jaaliyada bulshadeeda kala duwan sida ururka haweeynka, ururka dhalinyarada (OYSU) & jaaliyada guud halmeel lagu wada qadeeyay, ujeedada kulanka ayaa waxuu ahaa, Soo dhoweeyntii halgame C/lahi Xuseen uu uga warbixinayay xubnaha & barnaamijkii cun oo caawi oo ahaa mid lagu xusayay dhamaan daafaha dunida oo ay qabanayayeen ururada dhalinyarada (OYSU)
ugu horaynba waxaa lagu furay aayadaha quraanka kariimka kadibna loosara kacay heesta calanka.
Kadib waxaa laguda galay ajandahii shirka oo uu daadihinayay gudoomiyaha jaaliyada Sweden Mudane Abdinasir Gadhweyne oo kusoo dhaweeyay cod baahiyaha xildhibaan Gamandiid, kana war bixiyay xaalada halganka walibana si qota dheer uga hadlay warbixino xasaasiya & wax yeelooyin ayla damacsanaayeen qaar u shaqeeya gumaysiga balse ku guul daraysteen.
sidoo kale halgame Bashiir Yusuf ayaa asna warbixin dheer meela badana taabanaysay soo jeediyay.
Wax qudbaduhu ay iska daba dhacaanba waxaa lasoo gaadhay warbixintii ugu muhiimsanayd ee lasugayay oo uu soo jeediyay halgame C/lahi Xusein.
Abdulaahi waxuu si mugleh uga warbixiyay taariikhdiisa halgamed, waxuu sheegay inuu xubin noqday markii uu dhiganayay dugsi sare xiligaa waxay ahayd ayuu yidhi 10 sano ka hor, mudo kadib waxaan noqday ganacsade oo waxaan usoo wareegay dhankaasiyo galbeedka Itobiya, kadib waxaa laygu tashkiiliyay inaan la shaqeeyo gumaysiga, waxaan la shaqaynayay gumaysiga sadexsano ayuu yidhi,
Halkii ugu horaysay een ka hawl galay misana aankula kulmay dhibaataynta shacabka dulman waxay ahayd dagmada dhanaan, dabcan idinku waxaad maqasheen gabadh baa lakufsadaa, la jidh dilaa, laxasuuqaa & wax lamida balse hadaad aragtaan xaaladaha guracan ee shacabka loola dhaqmo qof waliba waxaa u kordhi lahaa cilmi waana wax qof waliba oo damiir lihi damiirkiisa siinaynin.
Halgame Abdulahi waxuu yidhi jeelka waxaa ku dhex yaala qolal loogu tala galay in gabdhaha lagu kufsado, waxaa lagu sameeyaa in tinta si arxan dara ah looga gooyo oo ay dib usoo bixi waayaan, dhanka kale wiilasha waxaa lagu dhex ridaa baraako biyo qaboow kolkuu qadhqadhaa laga soo saaraa deedna inta la garaaco hadana koranto lagu qabtaa, waxaad arki hal nin oo ay 10 nin budhaynayaan.
Sidoo kale kolkay liyu bolis ku hawl galadooda u baxayaan nin waliba waxuu wataa xadhig ay dadka ku dabaan, markaan arkay wax yaalahaas & inkaloo kabadan waxaan dag dag ula xidhiidhay jabhada ONLF, 2 sano ka hor ayaan damcay inaan kasoo goosto balse waxaanan ii dhamays tirnayn decumentgii aan rabay, waxaan go’aansaday wax aanan qoraal & af ahayn oo muuqda inaan keeno.
Kolkay gacantayda soo wada galeen intii iigu muhiimsanaydna waan kasoo baxsaday,
Hadalada halgame Abdulaahi oo aanan qoraal lagusoo koobi karin waxa kamid ahaa inuu soo wado film wax yaala badan lagusoo bandhigi doono, wax yaalahaas waxaa ka mid ah ayuu yidhi Cabdi Ubbo oo gabadh ku qasbaya inay dawlada uga mahad celiso qasabad biyo laga cabo,gabadhana ay leedahay hadhow ayaad naga fara maroojinaysaan ee waxba idiinka mahad celin mayno deedna la ciqaabay gabadhii!
Ugu dambayn halgame Abdulahi oo ay shacuurtiisa aad u kacsanayd ayaa uga mahad celiyay kasoo qayb galayaashii shirka, kadib xildhiban Riyale oo looga bartay erayo xigmadaysan ayaa asagana guubaabiyay una mahadceliyay kasoo qayb galayaashii shirka.
Waxaanan meesha ka maqnayn geeraaro & buraan buro halgameed oo ay soo jeediyeen halgame Abwaan Abdi Facuul & Halganto Ayan Ali Haydar.
Kulankaa oo xasaasi ahaa ayaa waxuu kusoo gabagaboobay jawi farxadeed & rayn rayn.